काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको खतरा, समुदायमा फैलियो भने के गर्ने ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको खतरा, समुदायमा फैलियो भने के गर्ने ?
काठमाडौँ, १६ असार । आइतबार बिहान स्टार अस्पतालमा मृत्यु भएका एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । रौतहट स्थायी घर भएका पुरुषमा सोमवार कोरोना पुष्टि भएको हो । उनको स्वाबको नमूना परीक्षण पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिषठनमा लगिएको थियो । उनीसंगै नेपालका कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २९ पुगेको छ । मृतकलाई श्वास–प्रश्वासमा समस्या भएपछि असार १३ गते रौतहतवाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । उनमा तीन महिनादेखि फोक्सोमा समस्या रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोमवार थप ४ सय ७६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पुष्टि भएसंगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १३ हजार २ सय ४८ पुगेको छ । ती मध्येमा १५ सय ८६ महिला र ११ हजार ६ सय ६२ पुरुष छन् ।सोमवार थप १ सय २१ जना निको भई बिभिन्न अस्पालहरुवाट निको भएका छन् । यो सहित नेपालमा कोरोनावाट निको हुनेको संख्या ३१ सय ३४ पुगेको छ । ती मध्ये महिला २ सय ६८ र पुरुष २८ सय ६६ जना छन् ।
पछिल्लो चौविस घण्टामा थप ७ हजार ७ सय ९१ वटा नमूनाको पिसिआर विधिवाट परिक्षण भएको थियो । हाल क्वारेन्टिनमा ५७ हजार ३ सय ६७ जना क्वारेन्टिनमा छन् भने १० हजार ८५ जना आइसोलेसनमा छन् ।सोमवार सवै भन्दा बढी संक्रमित हुने जिल्लाहरुमा बाजुरामा ६६ जना, दाङमा ५८, कैलालीमा ५८, अर्घाखाँचीमा ३८, गुल्मीमा २०, पाल्पा र वाग्लुङमा १४, पर्वतमा १३ जना छन् । त्यसैगरी अन्य जिल्लामा पनि संक्रमण थपिएको छ ।यो खबर नागरिक दैनिकमा छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सोमवार थप ८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । कोरोना पुष्टि हुनेहरुमा काठमाडौका ६ जना, ललितपुरका १ जना र भक्तपुरमा १ जना छन् । पछिल्लो समय काठमाडौ उपत्यकाको घनावस्ती भएका ठाउँहरुमा कोरोना पुष्टि भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले उपत्यकावासीलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौँका नागरिकहरुले लापरवाही र सरकारले बेवास्ता गर्दा एकैदिन १३४ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ । नेपालमा मंगलबार ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित फेला परेकामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै १३४ जनामा
एजेन्सी-चीनद्वारा उत्पादित ‘कोरोना बैंक’ नाम दिइएको भ्याक्सिनको परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चिनको सिनोवैक
कोरोना प्रयोगशालामा जनशक्ति अभाव हुँदा नमूना सङ्कलन गरिएको एक सातासम्म नतिजा कुर्नुपर्ने
चितवन, २७ साउन- चैतको अन्तिम साता हतारहतारमा स्थापना गरिएको भरतपुर कोभिड–१९ प्रयोगशाला व्यवस्थित गर्न नसक्दा
मालपोतका कार्यालयका ६ कर्मचारीसहित थप १५ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि
उदयपुर-उदयपुरमा आज फेरी मालपोत कार्यालयका ६ कर्मचारीसहित १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।